Imbali yoPhuhliso-i-Amethystum Storage Technology Co., Ltd.
“Leqa isibane, nokuba yintoni na kwaye naphi na apho sikhoyo kuwe. Yileqe.”
——UTyler Knott Gregson
Umtha wesine wokukhanya / Blueprint
Hamba emanzini kwaye uhambe ngomkhumbi, i-galaxy iyakhanya, kwaye umbono omtsha wekamva ubonakala phambi kwethu.
● 2021 Ikamva linokulindelwa...
NgoFebruwari ka-2021, isixhobo sokugcina i-Amethystum Storage sobuqu somthengi singene ngokusemthethweni kwisiseko sedatha yentengiso yeQela laseTshayina. NgoMeyi ka-2021, i-applet ye-Amethystum Storage "Amethystum NAS" yakhutshwa kwiqonga le-ecological lase-China i-He Caiyun, edityaniswe nzulu kwiqonga le-asethi ye-asethi yedijithali ye-China yabantu kunye neentsapho kwixesha le-5G.
● 2020 Ukuzalwa ngokutsha
Nge-26 kaFebruwari 2020, i-Amethystum Storage yafika ngempumelelo kwiBhodi yeNzululwazi kunye neTekhnoloji yoYilo lwe-Shanghai Stock Exchange, iqala uhambo olutsha. I-subsidiary yaseShanghai kunye ne-Shenzhen subsidiary yasekwa enye emva kwenye ukuze iphuhlise kwaye isebenze imarike yase-China yaseMpuma kunye ne-South China market.
● 2019 Uyilo
Ukulandela isicwangciso "sesibini sokuqala kunye nokudibanisa enye", amaziko okubuyisela intlekele yedatha akhiwe kwi-Inner Mongolia, i-Xiangtan nakwezinye iindawo, kwaye iimeko zesicelo seshishini likarhulumente ziye zaphuculwa ngokuqhubekayo. Phanda kwaye uphuhlise imidiya yokugcina i-holographic kwaye uqalise iimveliso zokugcina iifu zentsapho.
Ukusuka kokubengezela ukuya kwisibhakabhaka esineenkwenkwezi. Ngokobuchwephesha, iqhubekile ihleli kwiindawo eziphakamileyo, iphuhlise i-TB-level holographic media media kwaye yenza inkqubela phambili, kwaye iphuhlise ngempumelelo isizukulwana esitsha semveliso yosapho olukrelekrele lokugcina ilifu-Photoegg.
Umtha wesithathu wokukhanya / Uhambo
Imizamo yabalingani bexesha iguqule ubomi bube luhambo oluhle olunokulinganiswa. Kwakhona kwenza kube nokwenzeka ukuba ixesha elidlulileyo libe zizinto zonke ezinokuthi zibe ngabadlulayo, kunye nethuba lokuhlala ngonaphakade.
● 2018 Imbeko
Ireyithwe njengeshishini lokubonisa "indawo yogcino-nye" nguMphathiswa wezoShishino kunye neTekhnoloji yoLwazi, kwaye yakhethwa njengeshishini logcino olusekwe kwimizi-mveliso liSebe lezoShishino kunye nobuChwepheshe boLwazi. I-self-developed "Blu-ray Data Storage System" iphumelele uvavanyo lokuphumelela kwezobugcisa kwiSebe lezoShishino kunye neTeknoloji yoLwazi lweRiphabhlikhi yaBantu baseChina.
NgoSeptemba 9, i-2017, isikhungo sedatha esekelwe kwi-teknoloji yokugcina i-optical yafakwa ekusebenzeni, kwaye imveliso yokugcina ifu ye-AmeCloud yakhululwa, edibanisa ngokugqibeleleyo ukugcinwa kwe-optical kunye nefu.
● 2016 Uhambo
Ukuqala ukusuka eMeizhou, i-Amethystum ihamba ngokuqinileyo kwaye ngokuqinisekileyo ukuya kwihlabathi elibanzi. Ukusuka eGuangzhou ukuya eWuhan, emva koko ukuya eBeijing, kwavulwa isahluko esitsha. Ukuza kuthi ga ngoku, i-Amethystum iguqule ukusuka kumenzi we-hardware ukuya kumnikezeli wesisombululo, kunye neendawo zesicelo ezibandakanya amaziko okubuyisela intlekele yedatha, urhulumente, unyango, i-archives, njl.
Umtha wesibini wokukhanya/I-ankile yobunzima
Landela ukukhanya, ubambe ukukhanya, ube kukukhanya
● 2015 Ivunyiwe
Yiba lilungu le "International Optical Disc Archive Consortium (OPARG)". I-ZL6120 iphumelele iMbasa yeGolide yama-43 ye-Geneva yaMazwe ngaMazwe. Yazisa uluhlu lwe-MHL lweenkqubo zesixhobo sogcino lwemodyuli.
● Amathuba ka-2014
Kungokuchanekileyo ngenxa yalo moya wokusebenza nzima ukuba i-Amethystum iphumelele ngokuzimeleyo iimveliso ze-ZL series. Wonke umntu ufumene uvuyo kunye nemincili yempumelelo yebhetshi yokuqala yeemveliso, kwaye wafumana lonke ixesha elifanele ukukhunjulwa.
Umtha wokukhanya wokuqala / Ukuqhawuka kwisaqhwithi somoya
Nokuba kukho iinkwenkwezi ezimbalwa ezibonakala zodwa, emva kokudlula kwizaqhwithi, iindudumo kunye nemibane, zisenokukhanya ngokungenasiphelo ngokukhanya okumfiliba.
● 2013 qalisa
Oosomashishini banenjongo efanayo ezintliziyweni zabo ukwenza ishishini lokugcina iBlu-ray. Kwinkqubo yokugxila ekuphuhlisweni kwezixhobo ze-hardware, basebenzisa ulutsha lwabo ukuqamba amabali omsebenzi onzima.
● Ngo-2010 Osandul’ Ukuzalwa
Ngo-Ephreli 15, i-2010, i-Amethystum Storage yasekwa, yamisela i-Blu-ray yokugcina imidiya ye-R & D kunye nesiseko sokuvelisa, kwaye yaqala uphando oluzimeleyo kunye nophuhliso lwe-Blu-ray Discs (BD-R). Ukusuka apha, iqela leengcali zobugcisa, kunye namaphupha engqondweni, ukuqokelela kunye. Ukususela ngoko, i-amethystum yaqala "uhambo lokusukela ukukhanya."